नेपालका चर्चित यौनकाण्डहरु नायिका देखि सभासदसम्म - Purbeli News
नेपालका चर्चित यौनकाण्डहरु नायिका देखि सभासदसम्म
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत्र १८, २०७४ समय: १७:५३:५४
काठमाडौँ । पूर्व मिस नेपाल जेनिशा मोक्तानको भनिएको भिडियो सार्बजनिक भएपछि सुरु भएको अस्लिल भिडियो सार्बजनिक हुने क्रम निरन्तर बढ्दो छ । यूट्युब बाहेक सित्तैमा भिडियो अपलोड गर्न मिल्ने विभिन्न साइटहरुमा हिजो आज नेपाली अस्लिल भिडियो छ्याप्छ्याप्ती भेटिन थालेका छन् । अरुको देखासिकी गर्ने, कस्तो हुने रैछ त भनेर सेक्स गरेको भिडियो खिच्ने गरेको देखिन्छ । एक साथीले हेर त त्यो हामी फलानो ठाउँ बस्दा चिनेको दिदि हुनु हुन्थ्यो नि हो त्यो दिदि त विदेश जानु भएको थियो । त्यो दिदीको एउटा केटासँग सम्भोगरत भिडियो नेट मा रैछ । टन्नै हल्ला भएको छ यार, अचम्ममा परियो ।
सोच्दै नसोचेको कुरा सुनियो देखियो । कुरा बुझ्दा केटाको मोबाइल बाट खिचेको उक्त भिडियो उसको साथीले पाएर अरुलाई पनि ट्रान्सफर गरेछ र नेट मा पनि आएछ । अहिले उनलाई मान्छेको अगाडी मुख देखाउन सम्म लाज लागेको छ र नेपाल नै आउन सकेकी छैनन । निक्कै नै भएको नेपाली केटि मुना श्रेष्ठले आफ्नो केटा साथीलाई वेभ क्यामेरा मार्फत आफ्नो नाङ्गो शरीर देखाउनाले उनलाई निक्कै गाह्रो भएको थियो । आफ्नो भिडियो इन्टरनेट मार्फत सार्बजनिक भएपछि उनले सबै संग यो भिडियो हटाउनको लागि आग्रह पनि गरेकी थिइन ।
धेरै नेपालीले उनलाई सहयोग गरे तापनि अझ सम्म उनको भिडियो हटेको छैन । माया बजिन, आफुलाई नेपाली भन्दै अस्लिल फ्लिमको नायीका (पोर्न स्टार) बन्ने दौड धुप मा लागेकी एक महिलाले आफुले थुप्रै अस्लिल फ्लिम हरु खेलिसकेको बताउछिन । नायिका
नम्रता श्रेष्ठको यौन काण्डले पनि ठुलै चर्चा लियो । डिजे तान्त्रिक संग सम्भोगरत भिडियो सार्बजनिक भए पछि उनले निक्कै आलोचलना खेप्नु पर्यो । यति मात्र होइन एउटै फ्लिम बाट चर्चित भै सकेकी उनले फ्लिम लाइन बाटै बाहिरिनु पर्यो । क्याम्पियन कलेजको काण्ड होस् या गोदावरीको साली भेना काण्ड । यी सबैले नेपालीहरु किन यति धेरै समाजमा नपच्ने कार्यहरु गरिरहेका छन् किन ? आफ्नो इज्जतको ख्याल गदैनन भन्ने प्रस्न उठ्न थालेको छ । मोबाइल बाट पनि सजिलै खिच्न सकिने र प्राय सबैको हातमा मोबाइल हुने हुनेले हिजो आज यस्ता भिडियो हरु नेपालीहरु बढी पाउन थालिएको हो । यसरि समाजमा नपच्ने कुराहरु बाहिर प्रकाशमा ल्याएर आफ्नो इज्जत मा दाग लगाउनु र समाज बाट अपहेलित भै आत्मा हत्या सम्म गनु पर्ने स्थिति पनि कतिपयको लागि बन्ने गरेको देखिएको छ । त्यसैले यस्ता कार्य हुन बाट बच्न जरुरि छ ।
केहि नेपाली का यौन काण्डहरु यस्ता छन् अस्लिल तस्बिर तथा भिडियो सार्बजनिक गरिएका काण्डहरु श्रीषा कार्की को नाङ्गो तस्बिर पत्रिका मा प्रकाशित भए पछि उनले आत्महत्या नै गरिन । प्राप्त जानकारी अनुसार उनले भैसेपाटी घर मा झुन्डेर प्राण त्याग गरेकी थिइन ।
नम्रता र डिजे तान्त्रिक को यौन काण्डयो काण्ड ले नेपाली सामु निक्कै चर्चा पायो
सायद यति चर्चामा आएको नेपाली यौन काण्ड यो मात्रै होला । भनिन्छ नम्रता र डिजे तान्त्रिकको सम्बन्धको बारेमा तान्त्रिकको श्रीमतीले बारेमा थाहा पाएर यो भिडियो सार्बजनिक गरेको हो रे । भिडियोमा तान्त्रिक को भन्दा पनि नम्रताको अनुहार प्रस्ट देख्न सकिन्छ र भिडियो लुकेर खिचेको नभई सहमतिमा नै खिचेको जस्तो देखिन्छ ।
सभासद यौन काण्ड संबिधान बनाउन भनेर चुनेर पठाएका केहि सभासद संबिधान सभा को अबधि भर यौन कार्यमा धेरै समय लिप्त भए । एक सभासद लाइ त यौनकर्मी संग यौन क्रिया मा लिप्त रहदा रहदै पक्राउ गरिएको थियो
पुजा लामाको यौन काण्ड पूजा लामा एक चर्चित मोडल थिइन, चर्चामा आउन बेला बेलामा चाहिने नचाहिने कार्य गर्ने गर्छिन । मोडल बन्न आउने सुरुकै बेलामा टपलेस तस्बिर खिचेर हंगामा मच्चायेकी थिइन । कुन्नि के कुराले हो गर्दा उनले एकपटक आत्महत्याको प्रयास पनि गरेकी थिइन रे । पछिल्लो समयमा उनको सम्भोगरत भिडियो सार्बजनिक भएकोले हतार मै बिहेको नाटक सम्म गर्नु पर्यो । कतार गएर मुस्लिम बनेकि उनि केहि समय अघि देखि नेपाल मा बुद्ध धर्ममा लागेकी छिन रे ।
क्याम्पियन कलेज यौन काण्ड क्याम्पियन कलेजको यौन काण्ड ले पनि एक ताका निक्कै नै चर्चा पाएको थियो । मोबाइल बाट खिचेको भनिएको त्यो भिडियो एकताका प्रायः सम्पूर्ण बिद्यार्थी हरुको मोबाइलमा थियो । सुनिन्थ्यो ती विद्यार्थी इंडिया पढ्न गएका थिए रे तर त्यहाँ पनि उनीहरुले निक्कै हेला र तिरस्कार सहनु पर्यो र अपमानित हुनु पर्यो ।
धरानको नर्सको भन्दै एउटा भिडियो पनि केहि समय अगाडी चर्चामा आएको थियो । यसरि सम्भोगरत दृश्य बाहिर आएपछि मानिसहरु कसरि अरुको सामु मुख देखाएर हिड्छन होला ? यस्तै सम्भोगका भिडियो प्रकासित भए पछी उक्त व्यक्तिको जिबनमा परेको असर बारे केहि थाहा छ भने कमेन्ट मा लेख्न सक्नु हुन्छ । हाम्रो उदेश्य यहाँ पोर्न भिडियोको बारेमा जानकारी दिएर कसैको जिबनको बारेमा लेख्नु भने होइन । त्यसलाई अझ चर्चाको शिखरमा पुर्याउनु होइन । सम्भोग जसले पनि गर्दछ त्यो नौलो कुरा होइन तर यसरि सम्भोग गरे, गर्यो भनेर भिडियो सार्बजनिक गर्नु र अस्लिल तस्बिरहरु प्रकाशन गर्नु यो नेपाली समाजको लागि अपाच्य कुरा होइन । समाज बाट यस्ता कुकार्य हरु हटोस र यस्ता कार्य गर्नाले समाजले ति व्यक्तिहरुलाइ कुन तरिकाले हेर्छ त्यसको विचार गर्नु र आफ्नो जिबन राम्रो संग बच्न सक्नुहोस र समाज भन्दा तल गिरेर बाच्न नपरोस भन्ने मात्र हो । माफ गर्नुहोला भिडियो अपलोड योग्य छैनन् । (कर्णाली न्यूज)